UCamilo José Cela. Intsapho kaPascual Duarte kwizivakalisi ezili-12 | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Inoveli, Ezahlukeneyo
Hoy UCamilo José Cela Ngewayeneminyaka engama-102 ubudala, kodwa wasishiya ngo-2002. Nangona kunjalo, oyena mbhali waseGalikhi, intatheli, isincoko, umhleli kunye nomfundi kwaye uphumelele Umvuzo weNobel ngo-1989 (kunye ingawenzi Ngo-1995 phakathi kwezinye izinto ezininzi) uyaqhubeka nokuphila ngonaphakade kuyo yonke imisebenzi yakhe. Ke ndiyikhumbula kwi- ukhetho yamabinzana kunye neendinyana ze Usapho lukaPascual Duarte. Isizathu? Isiqwenga esothusayo salo msebenzi siphawule umfundi wam kunye nomlobi wam.
2 Amabinzana ali-12 aphuma kusapho lukaPascual Duarte
Kwakukho kwenye yezo ncwadi zifundwayo (Umkhondo, ovela eSantillana) ukusuka andikhumbuli ngqo kule khosi, mhlawumbi kunyaka we-5 okanye wesi-6 I-EGB. Kwaye nini, ngaloo maxesha Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nolwimi kunye nephepha lecuba elincinci, abantwana esikolweni bafunda nantoni na ekufuneka ifundwe. Kwakusisiqwenga nje, mhlawumbi enye yezona zinzima kwezininzi elinazo Usapho lukaPascual Duarte.
Mhlawumbi yahlala kwimemori yam ngenxa yolwimi, umdala kakhulu kwaye ungqwabalala, kwaye ngokuqinisekileyo ngenxa yomfanekiso endiphinde ndayenza xa ndiyifunda. Ndiyazi ukuba yintoni umpu kunye nendlela obulala ngayo, ndiyazi nokuba kunjani ukuba nenja. Ikwaphawule ngokungazi kwam ngekamva lam njengomfundi nanjengombhali, eli candelo apho ndingaziwayo khona indoda eyimbali yomntu wokuqala okanye ubunzima bayo okanye uburhalarhume. Yayiyindawo apho uPascual Duarte udubula inja yakhe.
Amabinzana ali-12 e- Usapho lukaPascual Duarte
Ke iyahamba Ukukhetha ibinzana yale noveli epapashwe ngo 1942Enye ye iyasebenza ingqungquthela Umbhali wayo, kodwa kunye nengxelo yaseSpain ye- XX yekhulu leminyaka.
Iyabulala ngaphandle kokucinga, ndinobungqina obufanelekileyo; ngamanye amaxesha bengaqondanga. Uyazicaphukela, uzithiye kakhulu, ngokuqatha, kwaye uvula i-razor, kwaye xa uvule kakhulu ufikelela, unganxibanga zihlangu, ebhedini olala kuyo utshaba.
Bonke abantu banesikhumba esifanayo ekuzalweni kwaye, njengokuba sikhula, ikamva liyavuya ukusitshintsha ngokungathi siyi-wax kwaye sihambe ngeendlela ezahlukeneyo kwisiphelo esinye: ukufa.
Izimvo ezisicaphukisayo azide zifike ngequbuliso; ngequbuliso urhaxwa ngaphandle imizuzwana embalwa, kodwa asishiye, njengoko sihamba, iminyaka emide yobomi ngaphambili. Iingcinga ezisiphambanisa ngobuhlanya obubi, olo lusizi, zihlala zifika kancinci kancinci kwaye ngokungathi ngaphandle kokuziva, ngokungathi ngaphandle kokuziva inkungu ingena emasimini, okanye ukusetyenziswa kwamabele.
Ilanga lalitshona; imitha yayo yokugqibela yayiza kubethelelwa kwipypress elusizi, ekuphela kwenkampani endandinayo. Kwakushushu; Ezinye iinyikima zazidlula emzimbeni wam; Bendingakwazi nokushukuma, bendibambeke ngokungathi ndikhangeleka ngathi yingcuka.
Izinto azikho njengoko sizicingela xa siqala ukuzibona, kwaye ke kuyenzeka ukuba xa siqala ukuzibona zikufutshane, xa siqala ukusebenza kuzo, zisinike izinto ezingaqhelekanga nezingaziwayo ukuba, ukusuka kumbono wokuqala, ngamanye amaxesha asishiywanga nasemva. Oku kwenzeka ngobuso esicinga ngabo.
Umntu akaliqheli ishwangusha, ndikholelwe, kuba sisoloko sinombono wokuba lowo simnyamezelayo owokugqibela kufuneka abekho, nangona kamva, njengoko ixesha lihamba, siqala ukuziqinisekisa-kwaye ngoluphi usizi! - eyona nto imbi kakhulu ingekenzeki ...
Ndingayenza enye into, nayiphi na eyenziwa ngamadoda amaninzi- ngaphandle kokuqaphela-; Uya kukhululeka, njengoko uninzi lwamadoda lukhululekile - ngaphandle kokuqaphela nokuba; UThixo uyazi ukuba mingaphi iminyaka yobomi phambi kwakhe, njengoko benayo- ngaphandle kokuqonda ukuba banokuyichitha kancinci-uninzi lwamadoda ...
Kulusizi ukuba uvuyo lwamadoda alwazi ukuba luza kusisa phi, kuba ukuba senzile, akukho mathandabuzo ukuba abanye abayithandi into yokuba abanye beya kusisindisa; Nditsho kuba kusihlwa endlwini ka-El Gallo kwaphela njenge rosari yesifingo, ngenxa yokungazi ukuba makume njani ngexesha. Le nto yayilula kakhulu, ilula njengezona zinto zibenza nzima ubomi bethu.
Kukho umahluko omkhulu phakathi kokuhombisa iinyama zakho nge-blush kunye ne-cologne, kwaye uyenza ngee-tattoos ekungekho mntu kufuneka azicime emva koko.
Eyona ntlekele inkulu yamadoda ibonakala ifika ingakhange icinge, inyathelo labo, lengcuka elumkileyo, ukusibetha ngolunya lwabo ngequbuliso nangobuqhetseba njengoloonomadudwane.
Ukuba imeko yam njengendoda ibindivumele ukuba ndixolele, ngendixolele, kodwa umhlaba unje kwaye ufuna ukuhamba ngokuchaseneyo akukho nto ngaphandle kokuzama nje.
Undibethile ngomlomo, kodwa ukuba besifikile ekufeni ndiyafunga kuwe ngofileyo wam ukuba ndiza kumbulala ngaphambi kokuba andichukumise. Bendifuna ukuphola ngoba bendisazi isimilo sam kwaye ngoba ukusuka endodeni kuye emntwini akulunganga ukulwa nompu ngesandla xa omnye ungenawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UCamilo José Cela. Usapho lukaPascual Duarte kwizivakalisi ezili-12